အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဧဝံဂေလိတရားကိုခုခံပေါလုထွက်ပြေးခဲ့ရသည်ဖြစ်လာလျှင်, သူတိမောသေအားဖြင့်ထိုသူတို့၏ဇွဲ, ယုံကြည်ခြင်း, ချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကြားသိသောအခါအသငျးတျောကိုအားပေးဖို့အက္ခရာများရေးသားခဲ့သည်။
ပီတိ - အရေးပါတဲ့အယူဝါဒ
လူအတော်များများဟာအရေးပါတဲ့အယူဝါဒသို့မဟုတ်သင်ကြားရေးအဖြစ်ပီတိပယ်ချ။ တချို့ကခရစ်ယာန်တွေကိုရိုးရိုးကငြင်းပယ်, ဒါမှမဟုတ်သာပုံဆောင်သဘောအရသို့မဟုတ်တင်စားမှုများကိုနားလည်သဘောပေါက်ရမည်ကြောင်းဆိုလိုတာ။ အခြားသူများပီတိပဲမှန်သည်, သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောသုံးပါးပေါင်းတစ်ဆူသို့မဟုတ်ဗတ္တိဇံအဖြစ် သာ. အရေးကြီးသောအယူဝါဒကလွှမ်းမိုးကြောင်းကိုယုံကြည်ပါတယ်။
ထိုအရပ်မှ, ပေါလုသညျအသငျးတျောတည်ထောင်ခဲ့ပြီးထိုအက္ခရာများရေးသားခဲ့သည်သည်အထိပြုလုပ်အကြောင်းကို 6-12 လအတွင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်နည်းသည်ပေါလုအားရေးသားခဲ့သည်တစ်ဦးသည်အလွန်ငယ်ရွယ်အသငျးတျောကဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤလူ, ယုံကြည်ခြင်း၌မျှမျှတတအသစ်အခဲ့ကြသည်ဖုံးကွယ်သို့မဟုတ်သင်ပေးသို့မဟုတ်ယေရှုရဲ့ပြန်လာအကြောင်းပြောဆိုရန်မဟုတ်ပါရှင်ပေါလုချန်လှပ်လျှင်ပင်။
ယခုပင်လျှင်သူသညျအသငျးတျောမျှော်လင့်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ထား, ယရှေု၏အမည်ရပြန် (v 10) ဖြစ်ဖို့ကဖျောပွထားနေတုန်းဒါပေါလုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် (အခန်းငယ် 5) သို့မဟုတ်ညီလာခံနောင်တတရား (အခန်းငယ် 9) ၏အခြေခံသွန်သင်ချက်တွေကိုဖျောပွထားရှိရာပထမဦးဆုံးအခနျးမှာ။
သက်သာလောနိတ်အတွက်ဘုရားကျောင်းမွေးဖွားခဲ့သည်နှင့်သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးအတှကျစဉ်ဆက်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတှငျနထေိုငျခဲ့သညျ။ သူတို့ဟာယေရှုနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းနှစ်ဦးစလုံးသည်ယခင်က (v14) ကိုကြုံခဲ့ရဖူးကြောင်း, ယုဒလူတို့အားဖြင့်အတူတူပင်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
ဒါကြောင့် "အံ့ဆဲဆဲ" သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်အသင်းတော်များ၏ပီတိအကြောင်းကို Pre-သို့ရောက်ရှိကတိတော်များကိုအဘယ်သူမျှမရှိပါသည်။ ဒါကဘုရားကျောင်းသခင်ဘုရား၏ပြန်လာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်မျှော်လင့်တှငျနထေိုငျနှငျ့ယရှေုအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရောက်စေဖို့အကြောင်းကြောင်းရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အဲဒါကိုစတင်နှင့်သခင်သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏နေ့စတင်သည်သောလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကကြီးစွာသောဒုက္ခ, ကဲ့သို့တူညီသောအသက်ရှုအထက်နှင့်အဖြစ်ဖော်ပြနေသည်နေစဉ်။ တဦးတည်းအချိန်သခင်ဘုရား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မအသငျးတျောကိုအပေါင်ပေးသည်။
အဆိုပါချီဆောင်ခြင်း - HARPAZO
1 သက်4း 16-17 - လာသောအခါကြီးသော command ကို, ထိုကောင်းကင်တမန်မင်းဘုရားသခငျ၏ Trump ၏စကားသံကိုအဘို့, သခင်သည်ကိုယ်တော်တိုင်ကောင်းကင်ကနေဆင်းရလိမ့်မည်။ ခရစ်တော်၏သာသေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါအသက်ရှင်ဖြစ်ကြပြီးကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူတို့နှင့်အတူအတူတကွမိုဃ်းတိမ်ကိုစီး (harpazo) ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရကြလိမ့်မည်။ ဒီတော့ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်, သခင်ဘုရားနှင့်အတူရှိရလိမ့်မည်။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "ပီတိ" ဒီကျမ်းမှဂရိစကားလုံး "harpazo" မှဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်ထံမှလာ "ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားရလိမ့်မည်။ " ဤသည်မှာစကားလုံး "harpazo" ကိုသာ NT 13 ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်သာနျအသငျးတျော၏ပီတိနှင့် ဆက်စပ်. 1 သက်သာလောနိတ်4မှာအသုံးပြုသည်။
"HARPAZO" (ရှိ-Pad-zo) ဂရိသည်နှင့်ယူသို့မဟုတ်ရုတ်တရက်ဆုပ်ကိုင် "ခိုးယူနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်" ကိုဆိုလိုသည်။ Harpazo အလှည့်အတွက်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်လာသည်သောလက်တင်စကားလုံးက "raptus" ဖြစ်လာသည် "ပီတိ။ " ဆွီဒင်ငါတို့သည်ပီတိနှင့်အတူ "ဒီချီဆောင်ခြင်း" ၏အယူအဆဘာသာပြန်ထားသောပါပြီ။
ဒါဟာစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ကိုစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အာကာသအတွင်းသူ့ကိုတွေ့ဆုံရန်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားညီလာခံဖြစ်လာယခုအချိန်တွင်တစ်ဦးနားလည်မှုပေးသည်ကြောင့်ထိုင်ဝမ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဘယ်လိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်နှငျ့ယရှေုသူ၏သားသမီးများကတိပြု, ယရှေု, ပေါလုဖိလိပ္ပုနှင့်ဆက်စပ်အတွက်စကားလုံး harpazo နှစ်ဦးစလုံးကြုံတွေ့ရ။
2 ကောရိန္သု 12:2- ငါသိသောသူတဆယ်လေးနှစ်လွန်လွန်ခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အားလူတတတိယကောင်းကင်သို့တက် (HARPAZO) ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခံခဲ့ရသည် - ငါမသိရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာရှိမရှိ။
သူသညျဘုရားသခငျ၏နက်နဲသောအရာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိရာရှင်ပေါလုသညျကောငျးကငျမှချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားပေးခဲ့သည်။ တူညီသောစကားလုံး HARPAZO လည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးနောက်တက်မြန်းသည့်နေ့များကိုဖော်ပြရန်ဗြာသညျယရှေု၏ကိုအသုံးပြုသည်
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 12:5- ထိုမိန်းမသည်ဘုရားသခင့နှင့်သူ၏ရာဇပလ္လင်မှသံလှံတံနှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့အုပ်ချုပ်ဖို့ခဲ့တယ်, သူ့ကလေးကချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားခဲ့သူတစ်ဦးသား, (HARPAZO), ကလေးတစ်ဦးဘွားမြင်လေ၏။
မဿဲ 11:12 - ထိုအခါယောဟန်သည်ဗတ္တိဇံဆရာများ၏လက်ထက် မှစ. ယခုတိုင်အောင်အကြမ်းဖက်မှုများအကြောင်းမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့နှင့်အကြမ်းဖက်မှုများကိုညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ကြသည် (HARPAZO) ကယောက်ျား။
ယောဟနျနှငျ့ကွန်နက်ရှင်ခုနှစ်တွင်ဗတ္တိဇံဆရာရဲ့ဝန်ဆောင်မှု HARPAZO လည်းအသုံးပြုသောစကားလုံးဖြစ်လာသည်။ ယရှေုသညျထောင်ထဲမှာခဲ့သောအခါသူသည်မိုဃ်းကောင်းကင်ညှဉ်းဆဲသောသူသည် (ကောင်းသော) အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူရမ်းကားများနှင့် ဆက်စပ်. ယောဟန်သည်အကြောင်းကိုပုံဆောငျသဘောအရပြော၏။ (အင်အား eng ကယူပါ။ ဘာသာပြန်စာပေ) တပ်ဖွဲ့ / တန်ခိုးတော်အားဖြင့်တစ်ခုခုကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ရန်စကားလုံး HARPAZO တစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ဖိလိပ္ပုသည် (HARPAZO) သခင်ဘုရားသည်ပယ်ရှားကိုဆုတ်လျက်, မိနျးမစိုးသည်နောက်တဖန်သူ့ကိုမြင်လျှင်, သို့ရာတွင်သူ၏လမ်းဝမ်းမြောက်အပေါ်ဆက်လက်ရေထဲကတက်ရောက်လာသောအခါ - 8:39 Acts ။
ဖိလိပ္ပုသည်ဂါဇာမှယေရုရှလင်မြို့မှတတ်သောလမ်းကိုဆင်းသွားကြဖို့, သခင်ဘုရားကိုကောင်းကင်တမန်မှတစ်ဆင့်ခဲ့ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ ဖိလိပ္ပုသည်ဖိလိပ္ပုသည်ဧဝံဂေလိတရားကိုမဟောပွောသူအဲသယောပိအမတ်တာမျိုးဘယ်မှာ။ ဖိလိပ္ပုကအပြည့်အဝယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်, သူတို့ရဲ့မစ်ရှင်ပြီးစီးခဲ့နှင့်အမတ်ဗတ္တိဇံကိုသောအခါ, ဖိလိပ္ပုသည်မြေကြီးပေါ်မှာအခြားသောအရပ်မှသခင်ဘုရားကိုချွတ်ယူသွားရောက်လာပါတယ်။
ယောဟန် 10: 28-29 - ငါကသူတို့ကိုထာဝရအသက်ကိုပေးသိုးတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ရကြလိမ့်မည်, အဘယ်သူမျှမငါ့လက်မှသူတို့ကို (HARPAZO) လုပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်အရာကိုခမည်းတော်သည်ငါ့အားပေးတော်မူပြီအပေါင်းတို့ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်, အဘယ်သူမျှမငါ့ခမည်းတော်၏လက်မှသူတို့ကို (HARPAZO) လုနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်မှာသူ့သိုးများအတွက်သိုးထိန်း၏နှလုံးကိုပြသတဲ့အံ့သြဖွယ်ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကသူ၏စကားသံကိုနားထောင်ပြီးသူ့ကိုနောက်သို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်။ သူကကျွန်တော်တို့ကိုပေးသည်သောဂတိတော်ကိုအဘယ်သူမျှမကသူ၏လက်မှကျွန်တော်တို့ကို "လု" ကိုနိုင်လိမ့်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုနောက်တဖန်မခိုးနိုင်ဘူးပေးထားတယျ။
ဒါဟာဘာမျှမယရှေုသညျဘုရားသခငျ၏မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ကိုကယျတငျတျောမူသောလုံခြုံရေးနှင့်ဧကန်အမှန်ပေးသည်။ စာတနျကသို့မဟုတ်အခွအေန, တစ်နည်းအတွက်ကွာသူ့ကိုလက်မှငါတို့ကိုလုကြပါဘူး။
အသကျရှငျဖြစ်ကြောင်းနှင့်သခင်ဘုရား၏လာမယ့်ရန်ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူတို့၏တားဆီးမရကြလိမ့်မည်ဟုငါတို့သည်သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆင့်ဆိုရမည်မှာ, - 1 သက်သာလောနိတ် 4:15
1 သက်သာလောနိတ် 1:10 - ထိုအခါဘုရားသခင်ကြွလာမှအမျက်တော်မှငါတို့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူသောအသေကောင်, ယရှေုကနေကြီးပြင်းလာတော်မူသောကောင်းကင်ဘုံမှသားတော်အဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်။
အဆိုပါပီတိအရေးကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှာအဲဒါကိုဆက်စပ်, သင်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်ပျက်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ဟုတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာက "အံ့ဆဲဆဲ" ဖြစ်ပါတယ်။
ပေါလုသည်စကားလုံး "ကျနော်တို့" ဟုသူကအသက်ရှင်လျှက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပီတိအခြေခံအားဖြင့်ပြီးသားပေါလု၏ထိုအချိန်ကဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုသောသခင်ဘုရားကြွလာမှကျန်ကြွင်းသောသူတို့ဖျောပွထားသညျ့အခါအသုံးပြုသည်။
8 - သခင်ဘုရားကြွလာကနီးသည်များအတွက်လည်းအကြမ်းခံသငျတို့သ Be နှင့်သင့်နှလုံးသားများကိုခိုင်ခံ့: ယာကုပ် 5
ပေါလုရဲ့တစ်နေ့တာ track သခင်ဘုရား၏ပြန်လာနီးစပ်ခဲ့, သူသည်ကောင်းကင်ဘုံမှယေရှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်မျှော်လင့်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့အသငျးတျောကတိုကျတှနျးတယျ။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်, ငါတို့သည်သခင်ဘုရား၏ပြန်လာတွေ့ကြုံခံစားတံ့သောမျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကျနော်တို့ရသောအချိန်ကိုအနက်ဖွင့်စကားပြောသည့်အခါကျနော်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏ပရောဖကျဇာတ်ကောင်နှိုင်းယှဉ်သောကွောငျ့, ကဖြစ်ပါတယ်။ သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ဘုရား၏နေ့ချဉ်းကပ်ပြီးလျှင်, မွေးဖွားဝဒေနာကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို၏။ တစ်နည်းလည်းအရှင်နျအသငျးတျော၏ပီတိနှစ်ပေါင်း၏ 70 နှင့်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကချဉ်းကပ်ကြောင်းညွှန်ပြခြင်း, အရာပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဆိုင်းဘုတ်များတွင်။
မြော်လင့်လာဆောင်သတို့သားသတို့သမီးအဆင်သင့်ရတဲ့စေသည်, သန့်ရှင်းဘဝအသက်ရှင်နှင့်သူ၏နောက်လာမည့်သတို့သားဖို့တာဝန်။ ဒါဟာအစထာဝရဘုရားသည်မိမိမေတ္တာနှင့်ချွေတာတန်ခိုးနှင့်ရောက်ရှိဖို့လိုလားသည့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်များအတွက်လိုအပ်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာသူတို့ဘုရားမရှိနှင့်မျှော်လင့်ချက်မပါဘဲထာဝရသို့သွားသည့်အခါကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတွေ့ကြုံခံစားသောဝိညာဉျရေးရာအဖြစ်မှန်စပ်လျဉ်းလျော့နည်းဆိုလိုဤကောင်းတစ်ဦးနှင့် host ပစ္စည်းစေသည်။
သခင်ဘုရားကိုနောက်တစ်ကြိမ်တစ်ဦးဆက်စပ်ပီတိ၏ကျူရှင်ကြီးပြင်းလာသောအခါအလားတူကာလ၌, 1800 ရဲ့နှောင်းပိုင်းအတွင်း, ကမ္ဘာကြီးကိုယနေ့သမိုင်းရဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသာသနာပြုများနှင့်တရားဟောကွားအဆတဦးကိုကြုံခဲ့ရသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းပရောဖကျတို့၏စကားအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကိုမီးကိုမီးရှို့ကြ၏။
သက်သာလောနိတ်အတွက်ဘုရားကျောင်းစာလုံးပေါလုရဲ့ခန်းဆိုင်ရာတရားတော်များပါဝင်သည်စာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ပေါလုကပီတိဟာအလွန်အရေးပါဖြစ်ရပ်များ, အန္တိခရစ် performanc နှင့်ဆငျးရဲဒုက်ခသင်ပေးနှင့်ဖော်ပြထားခြင်းနှစ်ဦးစလုံးကြောင့်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
2 သက်သာလောနိတ်လည်းဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကိုများ၏ပီတိအဘို့အချိန်ကိုမှတ် ဆက်စပ်. အတွက် NT အတွက်အများဆုံးအငြင်းပွားဖွယ်စာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
နညျးလမျးမြားစှာခုနှစ်တွင်, ပရိသတ်သည်အခြားယုံကြည်သူများ (8 1 သက်သာလောနိတ် 1) များအတွက်စံနမူနာ။ ဒါဟာသခင်ဘုရား၏ပြန်လာ၏စဉ်ဆက်မပြတ်မျှော်လင့်တှငျနထေိုငျတဲ့ဘုရားကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ဟာရုပ်တုကိုလုပ်သောသူနောင်တရလျက်, ကောင်းကင် (1 သက်သာလောနိတ် 1:10) ကနေသညျယရှေုပေါ်ထွန်းယခုဆိုင်းလင့်လျက်နေ၏။
ရှင်ပေါလုကသူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အထွက်သယ်ဆောင်ရန်ဆက်လက်ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရား (: 11-12 4) ရက်နေ့တွင်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာ, ပုံမှန်ဘဝအသက်ရှင်ရန်ညီလာခံတိုကျတှနျးထားကြောင်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာတစ်စောင်၌တည်၏။ သူသေလွန်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ပီတိနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်ထသောအခါငါတို့သည်တဖန်, ပြီးသားငါတို့ရှေ့မှာအိမ်ပြန်သွားကြပြီတဲ့သူချစ်ရသူကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကိုပြောပြခြင်းဖြင့်လည်းသူတို့ကိုနှစ်သိမ့်။
အဆိုပါပရိသတ်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်နှင့် ပတ်သက်. , နှင့်ကမ္ဘာကျော်လာလတံ့သော domstid နှင့်အတူကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ မိစ္ဆာကောလာဟလနှင့်ပေါလုအနေဖြင့်စွပ်စွဲချက်စာတစ်စောင်ယခုသူတို့လညျးဆငျးရဲဒုက်ခသောဤ domstid အတွင်းပိုင်းပြီးသားပါသောအသငျးတျောကစဉ်းစားမိတယ်။
သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလု၏ဒုတိယခန်းဆိုင်ရာတရားတော်များပါဝင်သည်စာတစ်စောင်၌ငါရေးလိုက်နှင့်သခင်ရဲ့နေ့သူသည်အာရုံစိုက်ချင်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လေးဒေသများဘုရားသခငျ့အမျက်ဒေါသ (Orge), နောက်ကျောရရှိထားသူသူနှင့်စွန့်ပစ်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာဆိုလိုနိုငျသောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို "apostasia", (ပီတိ) ဖြစ်ပါသည် ။
ပိုမိုနီးကပ်စွာစာမေးပွဲနှစ်ခုလုံးဖြစ်သည့်အကြောင်းပြောသောနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ပီတိပေါ်ညီလာခံမှပေါလုရဲ့သင်ကြားမှုအကျဉ်းချုပ်ဖော်သောအံ့သြဖွယ်ကျမ်းပိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့, အထူးသဖြင့်2သက်သာလောနိတ် 2:13 မှာအနည်းငယ်ကြည့်ရှုပါ။
2 ပေတရု 3: 10-23 - ဤတွင်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်ထို့နောက်ကျွန်တော်နေ့ကိုကောင်းကင်အလောင်းတွေဖျက်သိမ်းပါလိမ့်မည်, ကြှနျုပျတို့မွကွေီးပျေါမှာနိုငျငံတျော၏ 1000 နှစ်အကြာတွင်သစ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်နှင့်ပထမနေရာအတွက်မြေကြီးသစ်အရသိရသညျယရှေုမြင်နိုင်ပြန်လာရည်ညွှန်းခဲ့ပါဘူး။
ရှင်ပေါလုအံ့သြသွားလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ်သခင်ဘုရား၏နေ့ကိုဖော်ပြထားတယ်, နှင့်ညဉ့်အခါသူခိုးကိုကြိုက်တယ်။ ဒီလောကကမမျှော်လင့်ပါဘူးသောအခါ, နည်းတူရုတ်တရက်လိမ့်မည်နှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးပင်ပန်းရရှိသွားတဲ့နှင့်ဤကမ္ဘာသို့ကိုယ်တော်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြသသည့်အခါကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်။
ယရှေုခရယနေ့တစ်ခုသာ NT ဗျာဒိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ဘုရား၏နေ့့ညီလေးဗျာဒိတ်တော်သည်မဟုတ်, လူအမျိုးမျိုးတို့တရားသဖြင့်စီရင်အချိန် NT အတွက်အသေးစိတ်ဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး 6-19 မှာဖော်ပြထားတဲ့။ NT ညီလာခံပီတိနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဘခမည်းတော်ရှေ့တော်၌ထိုပြင်ဆင်မှုကိုရည်မှတ်မြေကြီးနှင့်မြေကြီးပေါ်မှာလူအသညျယရှေုခရစျသနေစဉ်ယနေ့ရည်မှတ် "သခင်ရဲ့နေ့" ။
ဤကျမ်းပိုဒ်၏ Betydningen ပင်တေကုတ္တေမှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောလူကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်မိမိအလုပ်စတင်အဖြစ်, အပြည့်အဝကောင်းကင်မှအိမ်ပြန်သူ၏အသငျးတျောကိုရောက်စေဖို့ယေရှုအားကြောင့်လာမယ့်, ယနေ့နောက်တစ်နေ့သညျယရှေုခရစျတျောဤလူမျိုးကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံ ယူ. စေမည်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ နေရာ - အရှင်ထာဝရဘုရား၏နေ့ရက်မတိုင်မီရာအရပ်ကိုကြာရာ။
သခင်ဘုရားအမျက်ဒေါသ (Orge) မှထိန်းသိမ်းထား
1 သက်သာလောနိတ် 1: 9-10 - သူတို့ငါတို့သည်သင်တို့၏လက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်နှငျ့သငျတျောမူသောဘုရားသခငျ, လူနေမှုနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုဖို့နဲ့ကောင်းကင်ကနေမိမိသားတော်စောင့်ရုပ်တုတို့ကိုကြဉ်ဘုရားသခင်အားလှည့်ဘယ်လိုဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုအဆိုပါ ဒေါသအမျက် (orge) (ek) မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့သူသေလွန်သောသူတို့သည်, ယရှေုကနေကြီးပြင်း။
1 သက်သာလောနိတ် 5:9- ဘုရားသခင့ဒေါသအမျက် (orge) ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခန့်အပ်မပြုခဲ့ပေမယ့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်များအတွက်
ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှေ့တော်၌ထိုအသငျးတျောရဲ့ပီတိများအတွက်အကြို-trib အယူဝါဒအရေးကြီးသောအငြင်းအခုံတစ်ခုမှာ, ယရှေုသညျကယျတငျလာရန်အမျက်တော်မှသူ၏ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်မူကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ (လာ Eng ။ ဒေါသ) ။
အမျက်ဒေါသ၏မူလစာသားထဲမှာဂရိစကားလုံး Orge ဖြစ်ပြီး, အင်္ဂလိပ်အဓိပ္ပာယ်ကို "အမျက်ဒေါသ, စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်ဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသခင်၏အမျက်တော်နှင့်ပြစ်ဒဏ်သည်ဤမြေကြီးပေါ်မှာသွန်းလောင်းပါလိမ့်မည်သည့်အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤကျမ်းနှင့် NT အတွက်ထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်ကိုအသင်းတော်အမျက်တော်ခံရဖို့လတ်, ဒါပေမယ့်အစားကနေကယ်ထိန်းသိမ်းထားခံရမကြောင်းပင်ဖြစ်သည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုနှစ်ဦးစလုံး။
(ek) "ကနေ" ဟူသောစကားလုံးကတဆင့်မသွားဘူး, ဒါပေမယ့်အစားမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်စာသားဘာမှမှမိမိတို့ဝေးကှာသှားဖို့။ 5th: ယရှေုသညျမဿဲ7တွင် "သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိထဲမှာပျဉ်ဖယ်ရှားခြင်း" ကသှကျသောအခါတူညီစကားလုံးကိုအသုံးပြုသည် အဆိုပါရောင်ခြည်သို့မဟုတ်အပြားထို့နောက်ဝေးကနေကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖယ်ရှားပြီးနေ့ကဖြစ်တယ်, မရှိတော့မျက်စိ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
19:15 Up ကို - ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်အဖြူမြင်းစီးသူ့ကိုနောက်တော်သို့လိုက်, သူတို့အဖြူ, သန့်ရှင်းသောပိတ်ချောအထည်ကိုဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ နှင့်နှုတ်တော်ထွက်စပစျြသီးသူနှင့်အတူတိုင်းအပြည်ပြည်ဒဏ်ခတ်သင့်တယ်, သူသည်သံလှံတံနှင့်အုပ်စိုးလတံ့သော, တစ်ဦးချွန်ထက်သောဓားကို လာ. , သူသညျဘုရားသခငျ, အနန္တတန်ခိုးရှင်သည်ပြင်းထန်သောအမျက်တော်သည် (orge) tramples
အဆိုပါဘုရားကျောင်းရှေ့ဦးစွာ မှစ. အဆုံးဤ domstid ကနေထိန်းသိမ်းထားလျက်ရှိ၏ဂတိရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုကျိုးအခါအသင်းတော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာမတည်မနေနိုင်သည်ကိုအတော်လေးရှင်းပါတယ်လျှင်။ ပေါလုသညျပထမဦးဆုံးမြေကြီးပေါ်မှာဒီ domstid အလိုတော်မတိုင်မီပေါ်ပေါက်ရမည်ဟုဖြစ်ရပ်များအကြောင်းကိုသွန်သင်ရှိရာ, အကြာတွင်2သက်သာလောနိတ်၌ဤအတည်ပြု။
ဗြာဒိတျ 3:10 - သင်ခံနိုင်ရည်အကြောင်းကိုငါ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, ငါကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးအပေါ်မှာရောက်နှင့်စမ်းသပ်ရန်၎င်း၏လူဦးဆောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်သည့်ကိုသင်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စုံစမ်းရာကာလတွင်ထံမှသင်တို့ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်။
အလားတူဂတိတော်ကိုသက်သာလောနိတ်အတွက်ဘုရားကျောင်းပေးထားခဲ့သည်ကိုလည်းဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွက် Philadelphia တွင်မှာဘုရားကျောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သူတို့ခံနိုင်ရည်အကြောင်းကိုသခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တရားကိုစောင့်ရှောက်သောကြောင့်, သခင်ဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှာလာလိမ့်မယ်လို့စုံစမ်းရာကာလတွင် (သပိတ်ပင်ထွက်ရာမှ) ၏မြို့နယ်ကိုထိန်းသိမ်းမယ်။ "ကနေ" ဟူသောစကားလုံး (ek) 1 သက်သာလောနိတ် 1:10 အသုံးပြုမှုကဲ့သို့တူညီသောစကားလုံးဖြစ်ပြီး, အသင်းတော်ကနေဆုတ်ခွာနှင့်prövelsensစဉ်ကနေဝေးလံသင့်ကြောင်းပြသထားတယ်။
Philadelphia တွင်မှာသခင်ဘုရားသည်ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း၏ဂတိမသာဘုရားသခင်၏အမျက်တော်၏အချိန်ကန့်သတ်, ဒါပေမယ့်ဂတိတော်နှင့်ဆိုင်သောညီလာခံတွင်မြေကြီးပေါ်မှာလာလတံ့သောစုံစမ်းရာတပြင်လုံးကိုတစ်နာရီကနေထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့။
Apostasia - စွန့်ပစ်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာ
2 သက်သာလောနိတ် 2:3- အဘယ်သူမျှမဆိုလမ်းထဲမှာသင်လှည့်ဖြားကြကုန်အံ့။ ပထမဦးဆုံး, အစွန့်ပစ်လာရမညျနှင့်မတရားမှု၏လူ, ဖျက်ဆီးခြင်း၏သားပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရှေ့ကိုရောက်လာသည်
ပေါလုကအသင်းတော်သို့သုံးအရေးပါဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်မယ်လို့ရှေ့တော်၌ထိုသခင်ဘုရားသည် (ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း) ၏တစ်ရက်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ဘူးအမည်ရကြောင်း, အရေးပါသောနှင့်အဆုံးအဖြတ်အငြင်းအခုံအကြောင်းကိုအသငျးတျောကိုသွန်သင်:
အဆိုပါစွန့်ပစ် (apostasia), လာရမညျပြန်ရရှိထားသူသူတဦးတယောက်မှ site ကိုမှလာရမယ်, လူ (အန္တိခရစ်) laglösthetensပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရှေ့ကို (Rev 6: 1) လာကြပြီ
ဂရိထဲတွင်စကားလုံးစွန့်ပစ်, သစ္စာဖောက်များနှင့်ပုန်ကန်မှုဟူသောစကားလုံးကို "apostasia" ဖြစ်ပါတယ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနာမ် "apostasia" ဟုအဆိုပါကြိယာမှလာ "afistämi" အဘယ်သူ၏ huvudbetydning "ရွေ့လျား" သို့မဟုတ် "ဟုတယောက်ကိုတယောက်အရပျမှတစ်ခုခုရွှေ့ဖို့။ " အဆိုပါစကားလုံးအထူးသကိုမဆိုတယောက်ကိုတယောက်နေရာမှရွေ့လျားအတူဆက်သွယ်မှုများတွင်အသုံးပြု, သို့မဟုတ်ပါကပယ်ရှားတတ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှကွဲပြားခြားနားသည်ဆိုပါကဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့သာနှစ်ကြိမ်အခြားတမန်တော်၌ "မောရှေအားစွန့်လွှတ်" သို့မဟုတ်တဖန်မောရှေအားထံမှယူဖောက်ပြန်အကြောင်းကိုပြောသွားဘယ်မှာ 21:21 ဖြစ်ပါတယ်ရှိရာ NT အတွက် apostasia နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှာပါ။ နာမ် apostasia အဆိုပါ NT အတွက်ရှားပါးပေမယ့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတဆယ်ကြိမ်အားဖြင့်ဆင်းသက်လာသောကြိယာafistämiရှိသေး၏။ သုံးဦးသာကိစ္စများတွင်ပါကဘာသာရေးအယူဖောက်ပြန်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ (1 Tim.1, ဟေဗြဲ 3:12 နှငျ့2တိ2း 9) ။
မတရားသောအမှု (2 တိမောသေ 2:19) ကနေ (လုကာ 2:37) ဗိမာန်တော်မှ, (12:10 Acts လုကာ 4:13) ကျန်ရှိနေသေးသောတကျိပ်နှစ်ပါးသောကိစ္စများတွင်ပါကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိ "ဝေးကနေရွှေ့ဖို့" afistämiမ ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ် (2 ကော 12း8) ကနေ။
အင်ျဂလိကကမျြးစာ၌, မွနျမာတစ်အောက်ခြေမှတ်ချက်လည်းမရှိ: "apostasia ရေခဲ၏တစ်ဦးကဖြစ်နိုင်သမျှတင်ဆက်မှု: (အသင်းတော်) ထွက်ခွာ။
သင့်ရဲ့ 1394 ကနေပထမခုနစ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာ - 1608, လူတိုင်းစကားလုံးကတော့ပီတိရည်ရွယ် "ထွက်ခွာသွား" (ထွက်သွား) ကဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်။ အလွန်ပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်ချက်များကို၏တဦးတည်းထွက်ခွာအစားနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုစွန့်ပစ်ကိုအသုံးပြုဖို့အဖြစ်ကိုဘယ်လိုက King James Version ကြောင်းဖြစ်သနည်း
1576 မှာလည်း "Rheims ကမျြးစာကို" ဟုခေါ် English သို့ကက်သလစ်ဘာသာပြန်ချက်ရောက်လာတယ်။ ဒါဟာစကားလုံးစွန့်ပစ်မယ့်အစားထွက်ခွာ (ထွက်ခွာ) ကိုအသုံးပြုကြောင်းပထမဦးဆုံးဘာသာပြန်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Kotolikerna ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကနေတဆင့် 1500 ရဲ့ရှေ့ပြေးသော "စွန့်ပစ်" ကိုညွှန်ပြရန်ဤဘာသာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ပြောင်းပြန်ဂျိမ်းဘုရင်ကမျြးစာကိုသူတို့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဂရိတ်ဖောက်ပြန်ရေးအဖြစ်ယင်း၏သွန်သင်ချက်တွေကိုထောက်ပြဖို့ဖြုန်းဖို့ထွက်ခွာရာမှယခင်ဘာသာပြန်ချက်များကိုမှပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဘာသာပြန်များထုတ်ဝေခဲ့သည့်အခါ 1611 ၌တည်၏။ ဒါဟာအရှင်လေ့လာသို့မဟုတ်ဤဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူစကားလုံး apostasia ၏အဓိပ္ပာယ်ကို, ဒါပေမယ့်သူကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမှညွှန်ကြားချက်မခံခဲ့ရပါဘူး။
အဆိုပါချီဆောင်ခြင်း - တိကျတဲ့အဖြစ်အပျက်
ဂရိ apostasia အမည်ရပေါလုအထူးသဖြင့်ကြိုတင်ဖြစ်ရပ်မဟုတ်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြစ်ပျက်သောအရာတစ်ခုခုမှထောက်ပြစေသည် (ပုံမှန်အားဖြင့်ဂရိစကားလုံးမဟုတ်ပါ) ကိုတစ်ဦးအဓိပ္ပါယ်ဆောင်းပါးရှိပါတယ်။
သဒ္ဒာနည်းဟာနောက်တဖန်နှစ်ဦးစလုံး "က" နဲ့ "သူ" အဖြစ်ဖော်ပြထားကိုင်ပြီးဖြစ်လာသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ထဲတွင်စကားလုံးဝိညာဉျကိုအဘယ်သူမျှမလိင်တစ်ဦးနှုတ်ကပတ်တည်းဟူသောစကားလုံးကိုဂရိတွင် "pneuma" ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတစ်ဦးပါ "ဟုသူ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ အဲဒီမှာအန္တိခရစ်ပြန်ကိုင်ပြီးရဲ့အရာပေါ်အများအပြားယူဆထားခြင်းမျှသာဖြစ်ပေမယ့်ပုလ်ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောထက်မကအခြားနိုင်ပါတယ်စဉ်နှစ်ဦးစလုံးလိင်မပါသောဖြစ်ကြောင်းပါပြီ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားအနီးကပ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်, GT ကိုခုနှစ်တွင် APG ကိုအခန်း 2. အတွက်ပင်တေကုတ္တေ၏နေ့မွကွေီးပျေါမှာ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲခြေရင်းထိပ်ဆုံးလူတို့နှင့်လည်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သလိုပဲကတည်းကရှိခဲ့သည်။ သူသည်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပြုလိမ့်မည်သကဲ့သို့။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဆငျးရဲဒုက်ခရှိလူများတွင်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆက်လက်ပေမယ် uppryckelsens အခိုက်အနေဖြင့်အထက်မှပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့မရှိတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အခနျး3အားဖြင့်၎င်း, ကျော်လွန်ပြီးကိုယ်စားပြုသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကိုကြည့်ပါ။ ခုနစျပါးသည်အသင်းတော်တို့အားစာလုံးတှငျကြှနျုပျတို့သည်ဤစကားကိုနားထောငျ: နားရွက်ရှိပါတယ်သောသူသည်ဝိညာဉ်တော်ကအသငျးတျောတို့အားအဘယ်သို့မိန့်ကြားပါစေ။ စည်းဝေးပွဲရဲ့ပီတိဖြစ်သည့်အခန်း 3, ပြီးနောက်မရှိတော့ပြောတတ်သူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13:9- နားရွက်ရှိပါတယ်သူကြားပါစေ။ မဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်လူတွေကိုကွဲပြားခြားနားသောကယျတငျတျောမူခွငျးတရားစီရင်သတင်းစကားနှင့်အတူကြွလာသည်ဟုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်, ထို့နောက်သူကအစားကိုကောင်းကင်တမန်များကပြုမိပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ (14 Rev: 6-7) ။
စည်းဝေးပွဲဖမ်းမိဖြစ်သည့်အခါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကိုပိုအနေဖြင့်လုပ်ကိုင်ဖို့နေရာမရှိရှိပါတယ်ထို့နောက်ညီလာခံသညျဘုရားသခငျကိုယနေ့သိတစ်ခုတည်းသောဗိမာနျတျောဖြစ်ပါတယ်။ (1 3:16) ။ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအတွက်ကိုယ်စားပြုကြောင်းတည်းသောခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းskökoförsamlingenဖြစ်ပါတယ်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အပြင်ဘက်ဒါမှမဟုတ်ထံမှလည်ပတ်ပါဘူးဖြစ်နိုင်သည်။
2 သက်သာလောနိတ် 2:13 အတွက်ပီတိ
2 သက်သာလောနိတ် 2:13 - သို့သော်ဘုရားသခင်ကအစအဦးအနေဖြင့်အမှန်တရား၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ယုံကြည်ချက်ဖြင့်သန့်ရှင်းခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအဖို့သင်တို့ကိုရွေးကောက်သကြောင့်, သင်သည်ထာဝရဘုရား၏ချစ်သောညီအစ်ကိုတို့ဘို့အမြဲဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအခညျြနှောငျနေကြသည်။
eng trans ဆိုတဲ့။ "သမ္မာတရားကိုသင်တို့အား၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်ယုံကြည်မှု၏သန့်ရှင်းစေခြင်းအားဖြင့်လှတျမွောကျခွငျးအဘို့, တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအသီးကို ရွေးချယ်. သောကြောင့်ငါတို့မူကားအကောင်း, သင်တို့အဘို့အစဉ်အမြဲသခင်ဘုရားကိုချစ်သောညီအစ်ကိုတို့သညျဘုရားသခငျကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်သင့်၏။ "
ဤကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ဆက်စပ်. ဖော်ပြထားခြင်းရန်အရေးကြီးပါသည်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာကထိုအခန်းဆိုင်ရာတရားတော်များပါဝင်သည်အက္ခရာများ၏သင်ကြားမှုတွေ့ရမှာပါ၏ဆက်သွယ်မှုအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ် "သခင်ရဲ့နေ့ဖြစ်၏။ "
အဆိုပါ antecedent မျြးအခနျးကွီး (အခန်း 2) ရှင်ပေါလုမယ့်ပထမဦးဆုံးတင်ပြပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရှေ့ကိုလာရမညျအရာမတရားမှုကို၏လူခန့်အသငျးတျောကိုသှနျသငျခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးတံဆိပ်ကိုမှာပေါ်ထွက်လာဖို့အန္တိခရစ်တွေ့မြင်သဖြင့်, မြင်းဖြူပေါ်လာသောအခါ။
ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုဤကျမ်းပိုဒ်များတွင်ဖော်ပြသောကယျတငျတျောမူခွငျးအဘို့အသောဤကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူ tantly ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ထုတ်ဖော်နှစ်ခုအက္ခရာများအတွက်သွန်သင်ကြပြီသောတူညီကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖြစ်နိုင်မည်နည်း ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကညီလာခံ၏ပေါလု၏မှုများထပ်တလဲလဲဆောင်ပုဒ်များသေးသောအခြားအတည်ပြုချက်ကိုဘုရားသခငျ့အမျက်ဒေါသနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အမည်ရသခင်ဘုရား၏ချွေတာရေးနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သည်။
ရှင်ပေါလုကိုအသုံးပြုသည်ကယ်တင်ခြင်း (soteria) ၏ဤစကားတော်ကိုနားလည်စေရန်, သငျသညျမြားကိုလညျးသူအတွက်လက်မှတ်ထိုးအခြိနျအတိုငျးအကအနက်ကိုဘော်ပြရန်ရှိသည်။
အဆိုပါစကားလုံးကယျတငျတျောမူခွငျး (။ ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း Soteria) ENG အတွက်အောက်ပါအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည် ဖြစ်. , Deliverable, ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကယ်တင်ခြင်း: ရန်သူဗလက္ကနေကယျလှတျ။
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းများတွင်အသုံးပြုသည် မှစ. , ငါတို့သောစကားလုံးအပြောင်းအလဲများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသည်နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်ကျနော်တို့လိမ့်မည်အချိန်အတွက်အက္ခရာများကျမ်းစာ၌ရေးထားလျက်ရှိသတည်းလာသောအခါမှဆွေမျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ OT ထဲမှာကျနော်တို့စကားလုံး 78 ကြိမ်ရှာဖွေမကြာခဏဟီဘရူးစကားလုံး Yeshu'ha နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းများတွင်အသုံးပြုသည်အချိန်ကာလ၏အများစု, ရန်သူများကိုသို့မဟုတ်ဣသရေလအမျိုးအဘို့ယာယီစမ်းသပ်မှုတွေထဲကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကယျတငျတျောမူခွငျးချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်ဤစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဝိညာဏကယ်တင်ခြင်းနှင့်ယာယီစိုးရိမ်ရေမှတ်သို့မဟုတ်အခြေအနေမျိုးကနေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကယျတငျတျောမူနှစ်ဦးစလုံးဖွစျနိုငျကွောငျးကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ NT အများစုဝိညာဉ်ရေးရာကယ်တင်ရာအသိအတိုကောက်နေစဉ် GT ကိုအများအားဖြင့်တစ်ဦးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းကွဲပြားခြားနားသောစာရေးဆရာများအသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပေါင်း 60 တစ်ကျြောကာလအတှငျးရေးသားခဲ့သည်။ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကယျတငျတျောမူ (soteria) ၏အဓိပ္ပာယ်ကရေးသားခဲ့သည့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးစလုံးအနက်ခံရနိုင်ပြီး, အရာကနေတဆင့်စာရေးဆရာဟူသောစကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ရှင်ပေါလုအကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်း 20 တစ်ကာလအတွင်းမိမိအစာကိုရေးနှင့်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသူ့ရဲ့အရေးပါမှုအချို့ကိုပြောင်းလဲ သို့ဖြစ်. သဘာဝပါပဲ။ ရောမပေါလုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအက္ခရာအချို့မှမတူဘဲဥပမာ, ဘယ်မှာနီးပါးအမြဲဝိညာဉ်ရေးရာကိုကယျတငျတျောမူ၏အရေးပါမှုနှင့်အသုံးပြုသည့်စကားလုံး, သက်သာလောနိတ်ပေါလု၏အစောဆုံးအက္ခရာများ၏တဦးတည်းဖို့စာတစ်စောင်ဖြစ်ပါတယ်။
သက်သာလောနိတ်နှင့်ဂလာတိမှပေါလုရဲ့အစောပိုင်းအက္ခရာများအက္ခရာခုနှစ်, ဝိညာဏကယျတငျတျောမူခွငျးကိုဖျောပွဖို့စကားလုံး '' Soteria '' ကိုသုံးတာပါ။ အဆိုပါစကားလုံးကိုလည်းဘုရားကျောင်းများ၏သမိုင်းတစ်အစောပိုင်းအဆင့်မှာတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်သူသည်လည်းဂျိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ 6, "Dikaio-oe" ဂလ 2:16, "exagorazo" ဂလ 3:13 စသည်တို့ကို: ရှင်ပေါလုမယ့်အစားတွေဖြစ်တဲ့ "kaleo" Gal 1 အဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရာကယျတငျတျောမူခွငျးကိုဖော်ပြရန်ဤအချိန်ကာလအတွင်းအခြားစကားများကိုအသုံးပြုသည်
ဖြစ်ကောင်းသက်သာလောနိတ်မြို့သားဖို့အက္ခရာများပြီးနောက်ရေးသားထားသောစာတစ်စောင်ကိုနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို "Soteria" ဘယ်တော့မှအသုံးမပြုပါရှိရာ 1 ကောရိန်သုခဲ့သည်။ ကိုယ်ကသာနောက်တဖန်အသုံးပြုသောကောရိန္သုစကားလုံးမှာဘုရားကျောင်းပေါလု၏ဒုတိယအက္ခရာ၌တည်ရှိ၏။ အဆိုပါစကားလုံးကဒီမှာသုံးကြိမ်အသုံးပြုသော, ကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံးအဝိညာဏကယျတငျတျောမူခွငျးနှငျ့ ပတျသကျ. အသုံးပြုသောစကားလုံးမြင်သောအခါကြောင်းပါပဲ။
ထိုသို့ပေါလုကသူ့ရဲ့အစောပိုင်းအက္ခရာများ၌ဤစကားလုံးအသုံးပြုသောအခါသူကဆဲ GT ကိုဒီစကားလုံးကိုအသုံးပြုလမ်းဖြင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အရှင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ယာယီစိုးရိမ်ရေမှတ်သို့မဟုတ်အခြေအနေမျိုးကနေကယျတငျတျောမူသောဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်နဲ့တူလှပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာအက္ခရာများသည်ပေါလုသည်ဤစကားလုံးကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရာကယ်တင်ရာအများစု betydning နှငျ့အတူရှိ၏။
1 နှင့်2သက်သာလောနိတ်၏အသီးအသီးအခနျးတှငျမဆိုယရှေု၏ပြန်လာ, ပေါလု၏ခန်းဆိုင်ရာတရားတော်များပါဝင်သည်သင်ကြားမှုကိုဆိုလိုသည်ထုတ်ဖော်။ ဒါကြောင့်ဤကယ်တင်တော်မူသညျပေါလု2သက်သာလောနိတ် 2:13 အတွက်ရည်ညွှန်းကြောင်းကိုယုံကြည်ရန်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားသောစကားများနှင့်ဖြစ်ပါသည်, ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါနှင့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပါသည်, ရှင်ပေါလုသွန်သင်သည်။
2 သက်သာလောနိတ်အခန်း2၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှုအခနျးကွီးကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းပြသထားတယ်:
1. တစ်ဦးကသတိပေး ( vs. 1-3)
2. apostasia ( vs. 3)
3. ဥပဒေမဲ့တဦးတည်း ( vs. 3-5) ပေါ်ထွက်လာ
4. နောက်ကျောကိုကိုင်ပြီး ( vs. 5-7)
5. အန္တိခရစ် performanc နှင့်ဆိုက်ရောက် ( vs. 8-9)
(10-12 ကျမ်းပိုဒ်) လူများ 6. ဘေးဥပဒ်များနှင့်ပရိယာယ်
7. တစ်ဦးကကျေးဇူးတင်စရာသခင်, နှင့်ဖုန်းခေါ် ( vs. 13-15)
ရှင်ပေါလုရေးကပ်တွယ်မှုကိုနှငျ့ဘုရားသခငျကိုပြင်ဆင်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဘို့ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌မိမိတို့၏ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြသောအခါ, တူညီသောအခနျးမှာကသူ့အစောပိုငျးကညွှန်ကြားချက်များအလငျး၌မြင်ကြရပါမည်။ တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေါလုဟောပြောပေးဘို့ကျေးဇူးတင်စကား, ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းစွာသူပြီးသားစာတလျှောက်လုံးသှနျသငျခေါင်းစဉ်အပေါ်အခြားတစ်ဦးအဆက်မှစတင်ကြောင်းအသစ်တခုဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
ဤသည်ဘုရားသခင့သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဘုန်းအသရေကိုအနိုင်ရနိုင်မည်အကြောင်း, ငါတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုအားဖြင့်သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီကားအဘယ်သို့ -2သက်သာလောနိတ် 2:14
ကျနော်တို့2သက်2အတွက်ဖြည့်ဆည်းနောက်တစ်နေ့ကျမ်းပိုဒ်သည်ခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဘုန်းအသရေပြော၏။ ပေါလုက "ပျက်စီး, အနိစ္စပေါ်တွင်တင်ရမယ်" နှင့်ဘယ်မှာ 1 ကောရိန်သုထဲမှာ၏ပွောသောဘုန်းအသရေပင်ဖြစ်သည် "ဒီသေတတ်သောမမြင်ဘူးပေါ်တွင်တင်ရမယ်။ "
သခင်ဘုရား၏အထံတော်ကသူ့အသငျးတျောကခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့, သူသည်သူ့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်ရနျကြှနျုပျတို့၏အလောင်းများကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာယခုအချိန်တွင်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်ဒီတော့ဒီတစ် uppryckelsens မှရည်ညွှန်းသည်ယနေ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ဘုန်းအသရေဖြစ်၏။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကျမ်းပိုဒ်တဆယ်နှစ်လုံးကိုတစ်ဆက်ဖြစ်တယ်, uppryckelsens နေ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ link ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ပေါလုသည်သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်သည်သို့မဟုတ်ဆငျးရဲဒုက်ခမတိုင်မီရှေ့ဆက်လာရန်အဥပဒေမဲ့တဦးတည်းကို (အန္တိခရစ်) ရှိစေခြင်းငှါမိန့်တော်မူ၏။ ဒါပေမယ့် site ကိုမှလာနိုင်တော့မည်ဖို့အန္တိခရစ်ရှေ့ဆက်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအဘို့, က (သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်) ၏ဘေးထွက်ထံသို့လာနောက်ကျောသူ့ကိုကိုင်ထားရမည်ဖြစ်သည်, သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားပထမဦးဆုံးအညီလာခံမပယ်ရှားနေကြသည်ရပါမယ်နှင့်မြေကြီးထဲကနေလွန်ပါ။
ယရှေုသညျဤအမွကွေီးပျေါကသူ၏မြင်နိုင်ပြန်လာအတိုင်းလိုက်နာရန်အများအပြားဇာတ်ကောင်မှထောက်ပြသည်။ ဒါပေမယ့်ပီတိတစ်ခုလက်မှတ်မထိုးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး, စည်းဝေးပွဲရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုအန္တိခရစ်သို့မဟုတ်ဣသရေလအမျိုးကိုသစ္စာတော်ကိုစောင့်ဆိုင်းမပါ, ဒါပေမယ့် "ကောင်းကင်ကနေမိမိသားတော်အဘို့အစောင့်ပါ။ " ရန်